Galina Sazonova: अभिनेत्री को जीवनी र Filmography
बारेमा Galina Sazonova को brightest, kindest को एक र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, आकर्षक महिला रूपमा बोल्छन्। यो सफल एक उज्ज्वल र अभिनेत्री रूस सम्मान कलाकार को शीर्षक धारण माग छ भन्ने तथ्यलाई अलग्गै, त्यो पनि एक मायालु पत्नी, एक अद्भुत आमा र अनुभव पन्ध्र वर्ष संग हजुरआमा छ।
यसको दर्शकहरूलाई धेरै Galina Sazonova ड्राइव च्यानल एक मा काम गर्दा बिहान टिभि एक समय मा जित्यो। उनको कोमल आवाज र एक निष्कपट मुस्कान unnoticed भएन। यसरी सारा दिन को लागि एक ठूलो मुड प्रदान, आफ्नो सकारात्मक शुल्क को लाखौं मानिसहरू बिहान सुरु गर्न वर्षौंदेखि व्यवस्थित अभिनेत्री।
धेरै हृदय charismatic Galina Sazonova मातहत, जीवनी विशेष ध्यान योग्य छ। कसैले त्यो प्रेरित हुन सक्छ, र कसैले साँच्चै इच्छुक हुन सक्नेछन्।
Sazonova Galina Petrovna मास्को मा डिसेम्बर 20, 1959 मा जन्म भएको थियो। जबकि केटाहरू ठाउँ को vastness जित्न गर्ने बारे सपना छन् बाल्यकाल सपना देखि धेरै बालिका, एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हुन। तर Galina तिनीहरूलाई एक थिए। उच्च स्कूल पछि, भविष्यमा अभिनेत्री एक डाक्टर हुन चाहन्थे र चिकित्सा स्कूल मा भर्ना गर्न लाग्नुभएको थियो।
स्नातक पछि, त्यो classmate जिज्ञासा त्यो अध्ययन गर्न जान चाहे जहाँ Galina आग्रह गर्नुभयो। केटी को थियेटर संस्थान प्रवेश गर्न प्रयास र प्रवेश परीक्षा, को गद्य, छोटो कथा र कविता थाहा पर्याप्त पारित गर्नेछ सुन्दा, Galina Sazonov प्रयास गर्ने निर्णय गरे। पहिलो पटक त्यो पार गरेनन्, तर यो निश्चित त्यो एउटा अभिनेत्री हुन चाहन्थे निर्णय। 1982 मा उहाँले सफलतापूर्वक भविष्यमा दृढ कदम आए Galina Sazonova यसको भित्ताहरू देखि, थिएटर स्कूल को अभिनय विभाग बोरिस Shchukin नाम स्नातक। अभिनेत्री स्कूल को अन्त्य गर्न भएको छ छैन, र उनको सबै भन्दा राम्रो गर्न दिइएको थियो अनुशासन सिकाउन त्यहाँ बसे - अभिनय।
तीन वर्ष 1985 मा नाटक स्कूल को अन्त पछि, Galina Sazonova पहिले नै Paraska, Salop र Khivrya को छोरी रूपमा फिल्म-प्रदर्शन "Sorochintsy उचित" मा शुरू भयो बेहतरीन छ। सधैं त्यो गरे के को लागि गम्भीरता र विशाल जिम्मेवारी उपचार अभिनेत्री को पहिलो फ्रेम देखि। यो विद्यार्थी हेर्दै गरिने विचार, Galina उत्कृष्ट र, सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा, गुणस्तर अभिनय देखाउन चाहन्थे संघर्ष।
अभिनेत्री निमन्त्रणा जो पहिलो शो, त्यो आफ्नो पत्नी को टाउको चिकित्सक को भूमिका खेलेका जहाँ "चिकित्सा गुप्ति", थियो। Galina एक टोपी, फरक भूमिकाको र विभिन्न वर्ण रूपमा प्रयास, जस्तै "द चेरी बागवानी," "सानो थिएटर troupe" को रूपमा विभिन्न थिएटर मा काम गरे।
Galina चलचित्रमा कार्य गर्न सिकाउने बिना आफैलाई कल्पना गर्न सक्दैन पनि रुचि, तर। को बोरिस Shchukin थियेटर स्कूल अभिनेत्री को अन्त पछि उहाँले अभिनय सिकाउन त्यहाँ बसे। त्यो कहिल्यै लगभग बीस वर्ष आरक्षित बिना आफूलाई दिन्छ, र यो कागज बस सुनिश्चित गर्न सिक्दै हुनुहुन्छ जो जवान कलाकारहरूको साथ अभिनय अनुभव साझेदारी गर्न ceases आफ्नो खेल दर्शकको चासो छ।
Galina द्वारा प्ले गरिएको भूमिकाको आफ्नो धेरै अभिनय अनुभव साझा छलफल र विद्यार्थी संग विस्तृत समीक्षा। त्यो एक अभिनेता लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गुणहरू करिश्मा र आकर्षण छ भनेर भन्छन्। कलाकार को शब्दहरूबाट, "यदि कुनै करिश्मा छ, यो सी छैन, र एक व्यक्ति कुनै आकर्षण छ भने, यो कतै प्राप्त गर्न सक्दैन।" स्कूल मा अध्यापन उनको व्यक्तिगत जीवन मा एक ठूलो छाप imposes। कहिलेकाहीं छोरा सर्गेई Galina विरुद्ध jokes: "आमा, तपाईं विद्यार्थी बोल्न गर्न सक्छन् थप चुपचाप हुनुहुन्न।"
यो उनको टाउको ज्ञान मा राख्न प्रयास गर्न, धेरै मायालु मान्छे हुनुपर्छ। Galina यसलाई "प्रकाश" विद्यार्थी द्वारा प्राप्त छ भन्ने तथ्यलाई देखि खुशी हुन्छ। अभिनेत्री यो सेट मा विभिन्न वर्ण र विभिन्न वर्ण फोटो गर्न प्रयास मा अझ बलियो छ क्षणमा त, सुटिङ संग शिक्षण संयोजन गर्न धेरै गाह्रो छ कि स्वीकार्छन्।
फिल्म उद्योग भविष्य बारे बोल्न, Galina यो देशको अर्थव्यवस्था मा निर्भर गर्दछ, र फिलिमहरु को संख्या कहिल्यै गुणस्तर मा विकास गर्न सक्षम हुनु विश्वास गर्छ भनेर भन्छन्।
Galina Sazonova मात्र एक सफल अभिनेत्री, तर पनि मायालु पत्नी र एक महान आमा। त्यो एउटा सुन्दर परिवार निर्माण र एक छोरा हुर्काउन व्यवस्थित। म Galina Sazonova यो गर्न सक्छ रूपमा, परिवार संग अधिक समय खर्च गर्न प्रयास र क्यारियर माथिको परिवार राख्दै गर्दा, हरेक अभिनेता सफल गर्न सक्नुहुन्छ। अभिनेत्री को पति - अर्थशास्त्री र उहाँको छोरा Sergey आमाबाबुको 'पाइला जाने र एक सफल वकील भयो गर्नुभयो।
अभिनेत्री त्यो उनको बच्चा एक अभिनेता बन्न कि सपना प्रयोग स्वीकारे। एक पटक, एक जवान केटा निर्देशक भेट्यो र उहाँलाई Cipollino को भूमिका प्रस्ताव गर्दा, उहाँले एउटा वयस्क उनको आमा मा अप हेर्नुभयो र भन्नुभयो छ। "होइन, म यस को लागि छैन" त्यतिबेलादेखि विषय आफ्नो परिवार मा राम्रो लागि बन्द गरिएको छ। र अधिक तीस वर्ष लागि पूर्ण अनुरूप आफ्नो पत्नी अभिनेत्री बसोबास। "एक सफल सम्बन्ध आवश्यक छैन लागि आफ्नो प्राण जोडीलाई बदल गर्न, र तपाईंले यसलाई सुन्न प्रयास गर्नुपर्छ", - Galina Sazonova भन्छन्। फोटो खुसी अभिनेत्री लेख मा प्रस्तुत।
एक अभिनेत्री जीवनमा स्थिति
आफ्नो साक्षात्कार मध्ये Galina रोचक जीवन अवस्था साझेदारी गर्नुहोस्। एक जाडो साँझ उनको छोरा 17 वर्षको हुँदा, त्यो घर आफ्नो गर्भवती प्रेमिका विवाह गर्न लाग्नुभएको थियो भन्दै आए। रूपमा Galina द्वारा पहिचान, उनको कार्य यसलाई मा-व्यवस्था भविष्यमा संग कुरा गर्न आवश्यक हुनेछ भन्दै, धेरै निन्दा र बच्चा को छुटकारा प्राप्त गर्न आग्रह गरे। तर यो नियम Galina Sazonova मा भएको थियो।
अभिनेत्री यसो भन्नुभयो: "म एक छोरी थिए भने, म कहिल्यै उनको गर्भपतन द्वारा उनको जीवन तोड्न अनुमति थियो।" तसर्थ, Galina, मानिसहरूलाई राय र सल्लाह बाबजुद, यो अझै पनि आफ्नो छोरा, त्यो विवाहको लागि युवा थिए र अर्थहीन बनाउँछ कि साकार समर्थित छ। दुर्भाग्यवश, वैवाहिक चाँडै अलग सर्गेई परे। तर नौ महिना पछि यो कार्य आफ्नो हजुरआमा मा प्राण उपासना र समवर्ती उनको अभिनय प्रतिभा को मुख्य प्रशंसकको छ जो Galina सुन्दर नातिनी दिनुभयो।
उनको पेशा तिर परिवार मनोवृत्ति
अभिनेता को काम ठूलो समर्पण आवश्यक र समय सीमित गर्न सकिँदैन। Galina शब्दहरू देखि, त्यो लेट राति घर आए र बिहान सबेरै छोड्न सक्नुहुन्छ। अभिनेत्री कहिलेकाहीं तपाईं नातेदार हेर्न छैन, घर बाहिर लामो समय को लागि छोड्ने छ। अभिनेत्री को पति यसलाई स्वीकार र सधैं समझ संग उपचार गर्न खोज्छ।
Galina Sazonova फिल्म नेतृत्व भूमिका प्रस्ताव गरेपछि, तर सुटिङ सेन्ट पीटर्सबर्ग मा ठाउँ लिन र यो परिवार छोडेर छ महिना लागि टाढा जान आवश्यक छ भनेर सिक्ने पछि अभिनेत्री अस्वीकार गरेको छ। यसरी यो स्पष्ट छ कि बनाउन को लागि उनको परिवार सधैं पहिलो आउनेछ।
यो निश्चित छ Galina Sazonova - टेलिभिजन र सुविधा चलचित्रमा काम अभिनय को एक धेरै नम्बर दावा जो अभिनेता। Filmography हेरोइन लेख धेरै विविध छ। अभिनेत्री धेरै चलचित्रमा तारा अङ्कित।
एक वर्ष पछि, "Sorochintsy उचित" फिलिम-प्रदर्शन मा debut पछि, त्यो फिल्म मार्था को भूमिका गर्न निमन्त्रणा गरिएको थियो "द रहस्यमय कैदी।" कि पछि, Galina अप क्यारियर सीढी तेजी भयो। शाब्दिक प्रत्येक निम्न वर्ष, अभिनेत्री चलचित्रहरू र धारावाहिक मा तारा अङ्कित।
Galina 2002 मा जारी भएको थियो जो कमेडी "प्रेम गर्नुहोस् गरौं", र यस्तो "हवाई अड्डा" र धेरै नाटक प्ले "पातालमा गर्न कुञ्जीहरू।" त्यो धेरै गीतिनाटकहरू मा भाग छ: 2008 मा "मेरो शरद ऋतु उदास", को श्रृंखला "Katina प्रेम" र shestnadtsatiseriynoy तस्वीर अन्ना Lobanova "रंग चरा चेरी" मा सोफिया Yefimovna Ilyina को भूमिका, मा "शरद प्रेमको मेलोडी" memorizing Lyubov प्ले।
खातामा Galiny Sazonovoy धेरै सफल र चिरपरिचित जस्तै "Ciao, Federico!" (2014), र यस्तो "चिकित्सा रहस्य" (2006) को रूपमा धेरै लोकप्रिय टिभी श्रृंखला रूपमा फिलिमहरु।
सकारात्मक र नकारात्मक दुवै: अभिनेत्री फरक भूमिकाको पस्त। "दारिम को स्वाद" मा आमा Zinaida एस को मुख्य भूमिका Galina को सही विपरीत थियो। पछि अभिनेत्री त्यो आफैलाई नकारात्मक भूमिका मा प्रयास गर्न चाहनुहुन्छ कि स्वीकार। एक परिदृश्य प्रस्ताव, निर्माताको उहाँले एक कुतिया रूपमा Sazonov हो भन्नुभयो, तर त्यो अन्य सबै पूर्ण भूमिकाको साथ, यो संग सामना।
2013 देखि 2015 को लागि, अभिनेत्री "जुनियर" लोकप्रिय टिभी श्रृंखला मा भिक्टोरिया, Alina आमा को भूमिका मा तारा अङ्कित। र 2006 मा, Galina Sazonov शीर्षक सम्मानित गरियो रूस बडे कलाकार को।
प्रेरणा Galina Sazonova
अभिनेत्री को खाने टेबलमा सारा परिवार भेला गर्न रुचि। त्यो मेरो परिवार र तिनीहरूलाई लागि खाना पकाउन हेर्न ठूलो खुशी ल्याउँछ। आफ्नो खाली समय मा, Galina Sazonova राम्रो पुस्तक जोडतोडले एक साँझ खर्च गर्न रुचि। अभिनेत्री मनपर्ने लेखक - लेवी Nikolaevich Gumilev।
तर माग अभिनेत्री आफ्नो प्रेरणा संगीत बाट ड्र। सबै को सबै भन्दा त्यो क्लासिक प्रेम गर्नुहुन्छ। यसलाई प्रेरित र Galina आकर्षित बल सक्षम बनाउँछ संगीत छ। तर धेरै रमाइलो अभिनेत्री फिर्ता त्यो सधैं मूल मान्छे को लागि प्रतीक्षा थियो जहाँ घर, ल्याउँछ।
Anton यूराल: प्रविधी समर्थन गर्न एक कल
Dyurrenmatt Fridrih: जीवनी र फोटो
फोटो र Britni Spirs को संक्षिप्त जीवनी
Grem हाँसो: जीवनी र फोटो
जीवनी Vertinskogo Aleksandra Nikolaevicha, आफ्नो रचनात्मक सम्पदा। परिवार Vertinskaya
Invalids लागि स्नान सीट। शवर सीट। अशक्त लागि सुविधाहरु कसरी सिर्जना गर्ने
एक जवान केटी को विचार: कसरी राम्रो प्राप्त गर्न?
मरियम Boleyn: जीवनी र प्रसिद्ध सुंदरियों उपन्यास
ई-चुरोट सही कसरी Refill गर्न
Juicer "भूरा" - स्वस्थ रस हरेक दिन
ब्रा खेल प्रकार, दृढ छनोट। महिला ब्रा
केक सजावट - रचनात्मकता र कल्पनाको लागि एक ठाउँ!
मानव मा शार्क आक्रमण - चलचित्रहरू छैन भयानक, तर वास्तविकता मा!